Muxuu Galabsaday?!!! |
Waxaan ahaa wiil ku noolaa Hargeisa gaar ahaan xaafadda sheikh madar, waxaan ku soo koray nolol aad u qalafsan. Somaali Ayaan ahay, gaar loo sooci jiray walina la soocayo, Waa lay takoori jiray maan aqoon sababta lay takoorayay, waayo waxaan la mid ahaa walaalahayga aanu wax wada baran jirnay, xanuun ii gaar ah maan qabin, wajigaygu muuqaal gaar ah muu lahayn oo dadka kamaan duwanayn, aabo iyo hooyo kuwooga la mid ahna waan la nolaa. aqoon yaridayda ayaa I siisay in aan sidan u fikiro,
waayo waxan ku caqliyaysatay iyado lay dhibsanayo oo aan wax naxariis ah lay haynin. marnaba kamaan heli jirin garab, gardaro mooye. Maan moodayn inay dhibka ila qaban dadka aan ka dhashay, Marar badan Ayaan isku dayay inaan ogaado waxa bulshada nala wada colaysiiyay, nasiib daro ma helo jawaab aan ku qanco oo cid hadalka iga gurtaba ma helo. Malinta aan booqano ehelkayaga oo daganaa xaafad laygu sheegay in lay yidhaahdo daami ayaa farxad iyo nolol naxariis leh iigu horayn jirtay, anigoo la joogitaankooda xiisaynaya ayaa layga soo kaxayn jiray. Inbadan wan ku dedaalay in aan ogaado waxay dadku dhinac noogu soocayaan balse da’dayda Ayaan ii samaxayn inaan ogaado xaqiiqda.
Nolashayadu waxay ahayd mid guriga hoostiisa uun farxadu ku eegtahay. Jaarka nagu xeeran way na dhibsan jireen in aanu ku dhex noolnahay, odayaasha iyo culimadu dhawr jeer ayay naga codsadeen in aanu ka guurno xaafada balse sababta anigu ma garanayo oo waxan ku doodi jiray dugsigayga Ayaan ka foganayaa, caruur ban ahay aan ciilka meesha yaala aanu gaadhaynine, noolaanshahayagii aanu xafadaha ku noolayn waxay keentay culays iyo cadaadis fara badan oo ka yimaada bulshada nagu xeeran, aniguna wax barashadayda dugsiga hoose Ayaan badhtamaha ugu jira oo aan si aan joogsi lahayn u wada, inkastoon caruur aan ahaa hadana hammiga qayrkay kama hoosayn. Dugsiga inaan kali ku ahaado oo aanan wax saxiib ah ku yeelan, inkasta oo ay culays igu ahayd hadana marna wax barashadayda umaan joojin. Aabo iyo Hooyo waxay u nugladeen nabarada daran ee bulshada aanu jaarka la ahayn waxyahooga ka samaysteen. Maalin dugsiga aan ka soo rawaxay Ayaan u imid hooyo oo jawi aanan hore uga baran ku jirta, iyadoo murugadu wajigeeda ka muuqato aayay iyadoo dhoola cadaynaysa igu tidhi waynu guurayna oo waxaynu u dhawaanayna ehelkeeni aad jeclayd inaad la joogto, mar waan farxay oo waxan ku farxay halkaan farxada iyo saxiibada ka heli jiray Ayaan u guurayna marna waxay igu noqotay culays oo waxan ogahay in sababta ka danbaysa ay tahay waxan aan haraadka u qabo in aan ogaado iyo ka fogaanshaha dugsigayga. Malintaan guurnay sidii hawada aanu ku noolnahay naloo diidi jiray, ayaanu nolol farxad leh galnay. Bulshada kala gadisan ee aanu la soo darisnay waa kuwo u badan qaar nolasha ka habsaamay oo ka hadhay bulshawaynta kale. Anigu hadii aan dhigan jiray dugsi gaar loo leeyahay oo tayo lahaa manta waxan galay dugsi aan la barbar dhigi karayn dugsigii hore , waxaan samaystay saxiibo tirro badano o aan xiiso badan u qabay muddo badan. Muddo yar kadib waxa samayn wayn igu yeelatay bulshada aan aroor walba ka soo dhex toosayay oo ah kuwo nolosha ka hadhay. naftaydii hammiyi jirtay, manta meel kale ayaa looga heesaya. Saxiibadayda waxa ka mid ahaa kuwa balwad laha oo markii iigu horaysay ee aan arko layaab igu noqotay balse mantaba iyagaan ka door biday dugsigaygii, ma aqaan goortan bugaagtaydii ku badashay daasadda baalashka ah, ma aqaan goortaan jaadka quud mooday, ma aqaan goortaan sigaarka uunsaday. Aniga oo og inay sababto iyo samayntu tahay bulshda aan dariska la noqonay. Maanta waxa ii dhaammay maalmihii colaadaha iyo gulufihii aan baadhistooda ku noqon gaadhay cilmi baadhaha. Maanta oo aan ahay nin wayn oo garaad iyo gafuurba leh waxaan ahay qaada ma dharge ka shaqaysta jarista timaha. Su’aasha ilaa maanta aan jawaab cid iga siisa aan laayahay waxa weeyi maxan galabsaday walaal maalmihii coladaha iyo faquuqa waxaan ahaa ubax yar?